बूढीगण्डकी पीडितको पिडामा निर्दयी सरकार | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
बूढीगण्डकी पीडितको पिडामा निर्दयी सरकार
Published On : ४ मंसिर २०७६, बुधबार ११:५०
गोरखाको आरुघाट, आर्खेत, धादिङको खहरे, विशालनगर क्षेत्रको मुआव्जा अहिलेसम्म तोकिएको छैन ।
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका अन्य गाउँपालिकाका प्रभावितले मुआव्जा लिएर त्यसको सदुपयोग गरिसकेको पनि बर्षौ भइसकेको छ । तर आरुघाट, आर्खेत, धादिङ, विशालनगर क्षेत्रका बासिन्दा मुआव्जाको बाटो हेरेर बसिरहेका छन् । सरकार भने उनीहरुको आशा, भरोसामाथि कुठाराघात गरिरहेको छ । सरकारले पीडितहरुको पीडाप्रति निर्मम ब्यबहार गरिरहेको छ ।
पहिलो समस्या त डुबानपीडितले मुआव्जा पाएनन् । दोस्रो त उनीहरुको घरजग्गा रोक्का छ । बैँकमा धितो राखेर कर्जा लिने, व्यापार बिजनेश गर्न पाएका छैनन् । छोराछोरी पढाउन पाएका छ्रैनन् । तेस्रो समस्या उनीहरुको क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम ठप्प छ । डुबानमा पर्ने ठाउँ हो भनेर सरकारले सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम गरेको छैन । न त आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुन्छ, न त आयोजना बन्छ भन्नेमा उनीहरु आस्वस्त छन्, न त यस्ता समस्या समाधान भएका छन् ।
यो अबस्थामा आरुघाटबासी गुज्रिरहेका छन् । उनीहरुको समस्या अत्यन्तै मर्मस्पर्शी छ । उनीहरुले मुआव्जाको दररेट बढि भनेकाले सरकारले तोक्न डराएको हुनसक्छ तर तोकेपछि उनीहरुले चित्त बुझाउँछन् कि बुझाउँदैनन् भन्ने परीक्षण नै भएको छैन । निर्धारण गरेर उनीहरुको अभिमत परीक्षण गर्नुपर्ने हो । मुआव्जा निर्धारणका लागि सबै तयारी पूरा भएको छ तर निर्धारण हुन सकेको छैन । कसका कारण निर्धारण भएको छैन भन्ने बारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ
रोटरी क्लव अफ गोरखासंग सिक्ने कि ?
रोटरी क्लव अफ गोरखाले मंगलबार एक समारोहका बीच ‘गोरखा क्याम्पसको आइसोलेशनमा बस्नेहरुलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्ने’
कोरोनामुक्त जिल्ला बनाउने अभियान सुरु गरौ
गोरखाका बिभिन्न क्वारेण्टाइनमा बस्नेहरुको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । ११ वटै स्थानीय तहका क्वारेण्टाइनमा बस्नेहरुको
वृक्ष रोप्ने मात्रै कि हुर्काउने पनि ?
यसबर्ष पनि वन डिभिजन कार्यालय, साबिक जिल्ला वन कार्यालयले ६६ हजार विरुवा रोपणका लागि जिल्ला
बहुउपयोगी मोरिङ्गाको उपयोग गरौं
मोरिङ्गा अर्थात सितलचिनीको खेती यसअघि पनि कुनै घरहरुमा रहरले लगाउने चलन छँदै थियो । देश